Xumbo, Milicsi - hadda Iftiin Iftiiminaya! | Martech Zone
Xumbo, Milicsi - hadda Iftiin Iftiiminaya!
Khamiis, Janaayo 25, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Ka dib markaan xoqay mawduucaygii hore, mawduuca Kubrick ee aasaasiga ah wuxuu igu bilaabay inuu igu soo kordho… waa nadiif oo fudud. Ka dib markii aan xoogaa feker ka helay mawduucayga ugu dambeeyay (aad iyo aad, aad loo habeeyay aka jabsaday anaconda mawduuca) kala goynta WordPress 2.1, waxaa igu kalifay inaan helo mawduuc cusub oo aan dhaqso u socdo.
Laga yaabee ribigii ugu xumaa (ama ugu fiicnaa) ee aan qaato wuxuu ahaa qoritaanka boggaga John Chow, kaasoo waqti ka qaatay kuwiisa mogadisho si aad ugu timaaddo baloogga oo aad wakhti adag ii siiso. Mahadsanid John! Aad ayaan u qoslay.
Waxaan dareemayaa wax yar oo kafiican barta maanta. Waxaan u maleynayaa inaan bilaabayo xiisaha weyn ee xiga ee ku saabsan Webka 3.0 low Xumbadu si aad ah ayey u khushuucsan yihiin dhowr sano ka hor, labadii sano ee la soo dhaafayna waxay ahaayeen milicsiga Webka 2.0 ee caanka ah. Iyada oo iftiinka jawigu yahay wax kasta oo jahwareersan oo leh noocyo cusub oo LCD iyo HDTV ah (waa inaad sameysaa wax si aad sicirka kor ugu hayso), shaki iigama jiro inay tahay tan xigta wax weyn shabakada.
Halkan ayaad ku maqasheen dadweynow! Waxaan kuugu soo bandhigayaa mawduuca WordPress Kubrick Blue Ambient Glow. Waxaan si fudud u badalay dhamaan sawiradii, waxaan ku daray labo qof oo dheeri ah, waxaanan xardhay qaar ka mid ah koodhka ku yaal cinwaanka cinwaanka si aan uga tago qolka bar menu aan ku daray. Sidoo kale waa inaan sameeyaa wax ka badalida CSS. Waxaan eegay barta IE7, Firefox 2 (Mac iyo PC)… ilaa iyo hadda aad ayey u wanaagsan tahay. Haddii aysan fiicnayn IE6… uh, u deg degsameeyaha cusub! Wali way xor yihiin!
Weli waxaan la dagaallamayaa labo plugins oo 'dhaha' inay diyaar yihiin 2.1 laakiin wey xireen goobta. Waan sii wadi doonaa hagaajinta iyo horumarinta bogga si loo helo sharaftiisa hore. Dulqaad yeelo!
Waxaan jabiyay WordPress 2.1
Erayada Barnaamijyada Weyn ama Weedho
Jan 26, 2007 at 10: 18 AM
Haddii aad ka saarto ballaca: 100%; ka #menubar waa inuu hagaajiyaa dhibaatada duudduuban ee jiifka ah.
Jan 26, 2007 saacadu markay ahayd 6:25 PM
Mahadsanid, Cade! Qado ayaan kugu leeyahay.
Jan 26, 2007 at 11: 41 AM
Si fiican ayaan u eegaa illaa iyo hadda Doug, waan jeclahay dhalaalka! 🙂
Jan 26, 2007 saacadu markay ahayd 6:28 PM
Jan 26, 2007 saacadu markay ahayd 3:23 PM
Waxaan jeclahay muuqaalkan aad uga fiican! Waxaan umuuqdaa inaan awoodo inaan waxyaabo kahelo goobta si dhaqso ah (waxyaabo indhaha uun kudhaca).
BTW, ma ogtahay inaad hada riixeyso Philips TVs (adoo adeegsanaya Ad-sense) Waxaan u maleynayaa "Buluuga" inuu dhaliyay maqaalka la xiriira…?
Waan arkay taas! Nooc qosol badan.
Jan 26, 2007 saacadu markay ahayd 6:39 PM
BTW, kumbuyuutar noocee ah ayaa adeegsanaya?
Jan 26, 2007 saacadu markay ahayd 6:56 PM
Mahadsanid, Sterling. Waxaan isticmaalayaa Faallooyinka Mawjadaha Brian. Aad uma xuma. Waxaan u baahanahay inaan rakibo nooc ka duwan 'subscribe to comments' plugin oo la shaqeeya… waana inaan wax ka beddelo taas si aan horay ugu hubiyo foomka rukunka.
Waxaa laga yaabaa inaan sameeyo hal shey oo dheeri ah taasna waxay ku dartaa sanduuq si aan ugu keydiyo macluumaadka ku jira buskudka.
Jan 26, 2007 saacadu markay ahayd 6:55 PM
Maxaad ula jeedaa dhalaalka jawiga?
Kormeerahaygu waa inuu jaban yahay.
Waxaan arkaa madax madaxeed iyo xadka buluug ah….
mmmhh .. Buluug…. cad…. col Waxaan u maleynayaa inaan arko qaab.
Jan 26, 2007 saacadu markay ahayd 6:58 PM
Xaqiiqdii maahan xudduud buluug ah, waa saameyn baalal leh oo muuqaal ah si ay ugu ekaato iftiin hoose. Waa wax yar oo dawakh ah.
Jan 28, 2007 saacadu markay ahayd 10:17 PM
Xumbada… Milicsiga… Laakiin ka waran kuwa caanka ah "Hooska Dhiga"? Waa tii wax walba bilawday!
Waxaan xasuustaa faallo qof dib uga bixiyay kulliyadda; "Haddii aan arko hoos kale oo hoos u dhac ah, waan aadayaa." Mararka qaarkood, goor dambe iyo habeen, waxaan la yaabaa haddii uu weli dareemayo jirro.
Jan 28, 2007 saacadu markay ahayd 11:03 PM
Waxaan iloobay hooskii ol ol! Taasi way wada bilaabatay, miyaanay ahayn ?!